Maskaxda Soomaalida waa Mid Yar | allsanaag
Maskaxda Soomaalida waa Mid Yar
Aqoonyahanada dalka Singabuur (Singapore) ayaa waxeey ka fakarayaan 40ka sanno ee soo socota iyo sidii loogu diyaarin lahaa nolol wannaagsan dadka dalkaas. Caqabadaha ugu weeyn ee dalkaas heestaa ayaa waxaa ka mid ah dhulka oo ku yar iyo sidii deeggaan loogu helli lahaa haddii dadku ay bataan, sidii cunno ku fillan loogu helli lahaa iyo waxyaabaha kalle ee dabbooli doona baahiyahooda mustaqbalka.
Meesha aqoonyahanada Soomaaliyeed ee qurbaha ka yimid ay ku soo tallo gallaan ineey masaakiinta waxooda yar ay horrey u sii qaataan, iyagoo xaasaskooda iyo carruurtooda ugga imanaya Yurub, Mareeykanka, iyo adduunkaa kalle.
Hadaba, marka aad daawato muuqaaladda hoose, ma is leedahay Soomaalida maskaxiyan waxeey ka mid yihiin dadka uggu maskada hooseeya caalamka?
Sababta Soomaalida ay dadkooda u heshiin waayeeyn ugana gudbi waayeen xeendaabka qabyaaladda, ma is leedahay waa maskaxdooda oo hooseesa darteed?
Shacabka dalka Ruwaandha ineey heshiiyaan, balse Soomaalida ay heshiin weeydo, ma isleedahay waxaa uggu wacan Soomaalida oo maskaxdoodu ay hooseeso?
In qofka Soomaaliga ah uu diido in dhib isaga loo geeysto, haddana uu isaga sameeyo ma isleedahay waa Soomaalida oo maskaxdeedu ay hooseeso?
In qofka Soomaliga ah uu dalkiisa burburiyo, mid kallena uu dhiso ma isleedahay waa Soomaalida oo maskaxdooda ay hooseeyso?
In Soomaalida oo dalkooda qani uu yahay, hadana adduunka looga dawariyo, iyagoo welliba ku faraxsan, ma isleedahay waa Soomaalida oo maskaxdoodu ay hooseeyso?
In xummaanta adduunka Soomaalida ay ka gasho kaalinta koowaan, haddana lagu farxo ma is leedahay waa caqliga Soomaalida oo hooseeyo. Hadaba, illaahoow na sii caqliga dadka reer Singabuur oo kalle iyo mid ka sii fiican si aan dalkayaga ugu dhisanno.
← Siyaasiyiinta Koonfurta Soomaaliya iyo xasuustooda Kalligii ayaa Isxilqaamay →